မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 10
452 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th July 2010, 9:12 pm
အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ဗျား........................ [You must be registered and logged in to see this image.]
453 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th July 2010, 12:08 pm
မန်ဘာအသစ်လေးပါ ပဲ ...
မသိတာတွေကို လည်း အားမနာတမ်းမေးချင်ပါတယ်....ခင်ဗျ....
454 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th July 2010, 5:44 pm
မေးတာကို ကျနော်တို့ မသိဘူးဆိုရင်လဲ မနားတမ်း ပုန်းနေပါ့မယ်။
455 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th July 2010, 5:54 pm
MITR ကနေ မင်္ဂလာရှိစွာနဲ့ ၀မ်းပမ်းသသာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
456 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th July 2010, 6:23 pm
တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်...ကိုမျိုးဇင်မောင်
IT ပညာရပ်တွေကို အတူတူ လေ့လာမျှဝေကြတာပေါ့။
457 မိမိကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်ခြင်း on 21st July 2010, 8:13 pm
တညျနရော : ဖားကန့်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-07-21
နာမည်က အိုက်ပီး ပါခင်ဗျာ
အားလုံးကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် နှုတ်ဆက်ပါတယ်
458 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st July 2010, 8:15 pm
MITR နည်းပညာဖိုရမ် နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
459 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st July 2010, 9:12 pm
ကြိုဆိုလျက်ပါ ကိုအိုက်ပီ [You must be registered and logged in to see this image.]
460 Hello To All Members on 26th July 2010, 2:01 pm
My name is Blackcoder.
Nice to meet you .... my friends
461 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th August 2010, 12:40 am
ကို Black Coder ရေ
MITR နည်းပညာဖိုရမ်က ခင်မင်စွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
462 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th August 2010, 11:54 am
ရောက်နေတာကြာပြီ အခုမှ ၀င်နှုတ်ဆက်တာပါ
အောင်ဆန်းဝင်း လို့ခေါ်ပါတယ် ။ မန္တလေးသားပါ။
လောလောဆယ် မင်းကွန်းမှာ နေ ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
463 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th August 2010, 7:05 pm
MITR နည်းပညာဖိုရမ်က နွေးထွေးစွာကြိူဆိူပါတယ်
464 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th August 2010, 4:41 pm
465 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th August 2010, 6:46 pm
ညီလေး အောင်ဆန်းဝင်းေ၇ အကိုလည်းမန်းလေးသားပါ
466 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th August 2010, 10:07 pm
အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
467 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th August 2010, 9:31 pm
တညျနရော : mandalay, Myanmar
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-08-09
ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာဖြိုးပါ member ၀င်ထားတာ မကြာသေးပါဘူး အများကြီးဝမ်းသာပါတယ် ဒီ ဖိုရမ်ထဲကိုရောက်တာ ကျွန်တော်မသိတာတွေ အများကြီး သိရပါတယ်
ကွန်ပျူတာ တက်ရမယ့်ကျောင်းသား တစ်ယောက်ပါ A+ တို့ Networking တို့ကို ကျွန်တော် အရမ်းဝါသနာပါတယ် အစ်ကိုတို့ရေ ဒီ IT နယ်ပယ်ကြီးက အရမ်းကျယ်တော့ဘယ်ကစလေ့ လာရမှန်းကို မသိဘူး အခုလောလော ဆယ်ကျွန်တော် အင်တာနက်ဆိုင်မှာအလုပ်ဝင်နေတာ
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွှန်တော်ရေးတာအမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ
468 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 27th August 2010, 2:00 pm
kyawswaphyoe wrote: ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာဖြိုးပါ member ၀င်ထားတာ မကြာသေးပါဘူး အများကြီးဝမ်းသာပါတယ် ဒီ ဖိုရမ်ထဲကိုရောက်တာ ကျွန်တော်မသိတာတွေ အများကြီး သိရပါတယ်
469 ကျွန်တော် နွေညီလင်း ပါ on 9th September 2010, 1:30 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-09-06
ကျွန်တော် သည် အသစ်ကလေး ဖြစ်သဖြင့် နားမလည် သည်များကို ရှင်းပြ ပါ လို့ တောင်းပန် ပါတယ် ဗျ
470 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th September 2010, 10:35 pm
အသင်းဝင်အားလုံးကို MITR ဖိုရမ်မှ နွေးထွေးစွာ
471 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th September 2010, 12:01 am
ကျနော်က Hacker လုပ်ပြီး နိင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်လို့ပါ။ သင်ပေးကြပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သတ်လို့လဲ ဘာသင်တန်းမှ မတက်ရသေးဘူး။ အချိန်မပေးနိုင်သေးလို့ပါ။ အဆောင်မှာပဲ ကွန်ပျူတာဖျက်နေတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။ [You must be registered and logged in to see this link.] ကို Hacking နဲ့ပတ်သတ်တာလေးတွေ ပေးပို့ပေးကြပါ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
472 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th September 2010, 8:44 am
MITR ဖိုရမ်က ကြိုဆိုပါတယ် ကိုနောင်ထွန်းလေး ရေ
ဖိုရမ်မှာ နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ
473 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2010, 4:38 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-09-26
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..ကျွန်တော်ကစီုးသီဟပါ..မန်ဘာဝင်တာမကြာသေးပါဘူး..computer ..internet နဲ့ပါတ်သက်တာအကုန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်..computer နည်းပညာနဲ့ပါတ်သက်တာတွေလဲလေ့လာချင်ပါတယ်..
474 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2010, 11:17 pm
MITR နည်းပညာဖိုရမ်က နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
475 Just to greet you all. on 7th October 2010, 10:54 pm
Nice to meet you all here. I am new to this site.
I am very interested in IT. But I have got very less chance to learn.
And I hope this site will help me in some ways.
Thanks to all. Have fun!
476 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 7th October 2010, 11:11 pm
welcome to MITR !
nice to meet u, Dhathagiri
i think u r wrong topic and u will need to go there ...
477 မိတ်ဆက်ခြင်း on 10th October 2010, 3:32 pm
ကျွန်တော့်နာမည် မုံနိုးပါ။ ကလေးမြို့က တီးတိန်ချင်းလုမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ website ကိုမြင်တော့ အားရ စိတ်ဝင်စားပြီး အဖြစ်မနေ member ၀င်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး
အခုမှ ကွန်ပြူတာကို စလေ့လာရမယ့်သူပေါ့ဗျာ။
အားလုံးလည်း ကျတော့်ကို ခင်ကြပါလို့။
အားလုံးရဲ့ အကုအညီကိုလည်း လိုချင်ပါတယ်နော်။
478 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2010, 4:26 pm
နည်းပညာများကို လွတ်လပ်စွာ မျှဝေခံစားနိုင်ပါစေခင်ဗျာ
479 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st October 2010, 9:11 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-10-20
ကျွန်တော်ကတော့ မန်ဘာအသစ်ပါ ခင်ဗျ။
ဒီမှာရှိတဲ့ ၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းများအားလုံးနဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကျွန်တော်က ITနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ လေ့လာတာမကြာသေးပါဘူး။
ဒီမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများက ၀ိုင်းဝန်းသင်ပြပေးကြပါ။
ဒီလို websites မျိုးရှိလို့လဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေ ITလောကအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက
480 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th October 2010, 1:45 am
အသင်းဝင်များကို MITR ဖိုရမ်မှနေ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက်ပါဗျာ
481 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th October 2010, 7:23 pm
byatta wrote: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ပညာလေးတွေကိုလည်း မျှဝေပေးပါဦး။
482 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th November 2010, 6:42 pm
ကျွန်တော်က ဆက်မော်ပါ BE (IT) နဲ. ဒီနှစ်မှာ YTU ကထွက် ပြီး IT field ၀င်ဖို.ကြိုးစားနေလို. ကူညီပေးကြပါ....အားလုံးကိုခင်ပါတယ်ဗျာ.....ကျွန်တော်.ကိုလည်းပြန်ခင်ကြပါ.....
483 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd December 2010, 7:50 pm
တညျနရော : ရန်ကုန်မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်နယ်ပယ်ဒေသ...။
ကျွန်တော်နာမည်က ဖြိုးသူပါ လင့်နိမ်းမှာ ဖြိုးသူနဲ့မရလို့ မိုးတိမ် နာမည်နဲ့ လုပ်ထားတာပါ ကျွန်တော်ကိုသင်ပေးကြပါနော် ကျွန်တော်က သိချင်တာ နည်းနည်းများတယ်ဗျ အကျင့်ဖြစ်နေတာလေ အိုင်တီနဲ့ပတ် သတ်ရင်လေ့လာစရာတွေကလည်း ကုန်မှမကုန်တော့တာ အဲ့ဒါကြောင့် အားမနာတမ်း မေးရင် စိတ်မဆိုးရဘူးနော် စိနီယမ် မန်ဘာများ..............။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..........။
484 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th December 2010, 9:51 am
ဆက်မော် wrote: ကျွန်တော်က ဆက်မော်ပါ BE (IT) နဲ. ဒီနှစ်မှာ YTU ကထွက် ပြီး IT field ၀င်ဖို.ကြိုးစားနေလို. ကူညီပေးကြပါ....အားလုံးကိုခင်ပါတယ်ဗျာ.....ကျွန်တော်.ကိုလည်းပြန်ခင်ကြပါ.....
ကျွန်တော်လည်း IT Major ပါဘဲ... ဒီနှစ် B.Tech (First Year) ပါ...
စီနီယာ တစ်ယောက်ကို တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်..
485 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th December 2010, 6:02 pm
အော်ဒါနဲ. ငါ.ညီ $ƴǩǾ gmail ၇ှိလား?
486 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th December 2010, 3:50 am
ကျနော့် က ကောင်လေးငယ်ပါ၊၊ဒီ ဆိုဒ်လေးကို လူတယောက် လမ်းညွန်လို့ ရောက်ခဲ့ တာပါ၊၊အရမ်းသဘောကျပါ
တယ် ခု အမြဲ ဖတ်ပါတယ်၊၊တော်တော် ဗဟုသုတလဲ ရပါတယ်၊၊ကျနော် ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်တခု လုပ်ထား
ပါတယ် ခု sharing လောက်ပဲ လုပ်နိုင်သေးလို့ အားမရသေးပါဘူး၊၊ လေ့လာပါဦးမယ်.
ကျနော့် GMAIL က [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ
ကျနော့် ဆိုက်က [You must be registered and logged in to see this link.]
487 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th December 2010, 6:22 pm
လာပြီး မိတ်ဆက်တာ အားလုံးကို ဟီး
488 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th January 2011, 10:47 pm
489 Hello every one on 16th January 2011, 9:57 pm
်ကျွန်တော်က fireprince ခေါ်<ko ye>ပါခင်ဗျာ...... Net work နဲ့ ပတ်သတ်လို့ လေ့လာဆဲ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ပါ ခင်ကြနော်
490 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th January 2011, 8:31 am
Net work ပညာရှင်ဂျီး အမြန်ဖြစ်ပါစေဗျာ
491 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th January 2011, 9:23 am
fireprince wrote: ကျွန်တော်က fireprince ခေါ်<ko ye>ပါခင်ဗျာ...... Net work နဲ့ ပတ်သတ်လို့ လေ့လာဆဲ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ပါ ခင်ကြနော်
Forum မှကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ရည်းမှန်းချက်အတိုင်းလဲအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
492 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th January 2011, 11:21 am
MITR က သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော့် နာမည်က နေသူရိန်ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုမှ MITR ထဲကို ၀င်ရောက်လာတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ မသိနာမလည်သေးသမျှကို လမ်းညွှန် ဆုံးမ ကြပါလို့ ။ ကျွန်တော်က SE ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာရှိသော နေ့ လေးတစ်နေ့ပါခင်ဗျာ ။
493 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th January 2011, 3:11 pm
Naythuerin wrote: MITR က သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော့် နာမည်က နေသူရိန်ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုမှ MITR ထဲကို ၀င်ရောက်လာတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ မသိနာမလည်သေးသမျှကို လမ်းညွှန် ဆုံးမ ကြပါလို့ ။ ကျွန်တော်က SE ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာရှိသော နေ့ လေးတစ်နေ့ပါခင်ဗျာ ။
ကြိုဆိုပါတယ်...နေသူရိန်။ SE ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းအဖော်ရတာပေါ့။
494 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 22nd January 2011, 7:28 pm
495 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd January 2011, 9:45 am
နောက်ကျမှ ကြိုဆိုမိတဲ့အတွက် ခွင့်လွတ်ပါ ဦးထွန်းရေ..
496 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th January 2011, 1:29 pm
တညျနရော : ကွန်ပြူတာရှေ.
အိုင်တီနဲ.ပါတ်သတ်ပြီး ယူသင့်တာတွေယူမယ်။ ပေးသင့်တာတွေပြန်ပေးမယ်လို. စဉ်းစားထားပါတယ်။
497 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th January 2011, 2:14 pm
kopyaesone wrote: ကျွန်တော်ကတော့ ကိုပြည့်စုံပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ MITR ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
498 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th February 2011, 7:49 am
ကျွန်တော် nGr69 ပါ
မသိသေးတာတွေတော်တော်များနေလို့မေးတော့မယ်နော်
499 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th February 2011, 1:11 pm
တညျနရော : Chicago City/Illinois State/US
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-01-31
တားနာမည်က ကြယ်စင် လို့ ခေါ်ပါတယ်၊ မိတ်ဆက် နေရာလေးမှာ။
အဲဒါကြောင့်..လေ့လာချင်တဲ့ စိတ်နဲ့...Myanmar IT အင်အား ဆိုဒ်ကို ရောက်လာရခြင်း..ဖစ်ပါသည်။
500 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th February 2011, 8:31 am
nGr69 နဲ့ Kyal Sin
501 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 22nd February 2011, 4:27 pm
ကျွန်တော်က ပြည့်စုံပါ..... အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတော့ .....နှုတ်ဆက်ပြီးပြီလားဆိုတာ မေ့နေတယ်ဗျာ...
502 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]